Tag: kutsvaga kwevhidhiyo | Martech Zone
Tag: kutsvaga kwevhidhiyo
Chitatu, November 2, 2016 Chitatu, November 2, 2016 Douglas Karr
Tichangobva kuwedzera timu yedu kubazi redu kuti ibatanidze muongorori wevhidhiyo ane ruzivo, Harrison Painter. Ndiyo nzvimbo yatinoziva kuti tiri kushaya. Ipo isu tichinyora uye nekuita inoshamisa animated vhidhiyo pamwe nekugadzira makuru maPodcast, vhidhiyo yedu blogging (vlog) haipo. Vhidhiyo haisi nyore. Simba rekuvhenekesa, mhando yevhidhiyo, pamwe nem odhiyo zvinonetsa kuita zvakanaka. Isu hatidi kuburitsa avhareji mavhidhiyo anogona kana asingatore